Maxay tahay sababta saraakiisha ciidanku ugu biirayaan BJFS? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxay tahay sababta saraakiisha ciidanku ugu biirayaan BJFS?
Fowsiya Yuusuf, waxa ay hore u soo noqotay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya, intii u dhaxeysay 2012 ilaa 2014.
MUQDISHO, Soomaaliya – Hoggaamiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Qaranka [NDP], oo ah xisbiga kaliya ee ka jira Soomaaliya ee ay hoggaamiso haweeney, Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan, ayaa nasiib darro weyn ku tilmaantay in saraakiishii ciidanka ay u kala ordayaan ku biiritaanka baarlamaanka.
Hab-dhaqankaan, ku soo kordhay siyaasadda sanadkaan, ayay u sababeysay shaqo la’aanta ku habsatay saraakiishii qibradda lahaa, kuwaas oo iyaga oo jooga, sifo ka baxsan xeerarka ciidanka, lagu dul-darajeynayo dhallinyaro la doonayo in si gaar ah loogu adeegto, waxayna tallaabadaas ku tilmaantay khalad weyn.
“Waa khalad, in nin korneyl ahaa labaatan sano, wiil yaroo uu dhali karo la yiraahdo Jeneraal-baa tahay oo laga dul-mariyo, ciidanku wuxuu ku shaqeeyaa moral iyo ixtiraam, nasiib darro Korneylladii iyo Janannadii maanta baarlamaanka ayay u cararayaa, sababta oo ah shaqo looma dhiibayo”. Ayay tiri Fowsiya.
Sanadkaan ayaa la filayaa in saraakiishii ugu badnaa ku biiraan ciidanka, waxaana durba la xaqiijiyay ku dhawaad shan Janan, halka toboneeyo kale diyaar u yihiin baratanka kuraasta dhiman, saraakiil ka tirsan NISA, ayaa si weyn uga dhex muuqan doona kuraasta bishaan la qorsheeyay in la doorto.
Keydmedia Online, ayaa fahansan in Kooxda Farmaajo doonayaan in inta badan saraakiisha u adeegeysay shanti sano ee la soo dhaafay u raadiyaan kuraas baarlamaan, si ay u helaan xasaanad, maadaama ay gabood-fallo xooggan geysteen intii ay xilka hayeen, halka kuwa aan shantaas sano shaqo qabanna nolol ka raadinayan Baarlamaanka.
Fowsiya Yuusuf Xaaji, oo ah haweeneydii ugu horreysay ee si rasmi ah ugu dhawaaqda inay tahay musharrax u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya doorashada la filayo in ay sanadkan dhacdo dalka, ayaa sheegtay in sida hadda wax ku socdaan ay sababi doonto in AMISOM, aysan ku bixin xilligii loogu tala-galay.
Fowsiya Yuusuf, waxa ay hore u soo noqotay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya, intii u dhaxeysay 2012 ilaa 2014, xilligaas oo uu dalka hoggaaminayay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Ma sahlana in haweeney qabato jagada ugu sarreysa dalka Soomaaliya, marka loo eego dhaqanka soo jireenka ah ee so tixnaa tan iyo markii la yabyabay dowladnimada Soomaaliya lixdan sano ka hor.